Nyowani iTwin Cloud Services yeZvivakwa Injiniya Dhijitari Mapatya - Geofumadas
Mapatya emaDhijitari anopinda mukati mehukuru: makambani einjiniya uye varidzi-vanoshanda. Isa madhijitari mapatya ekuita muchiito
SINGAPORE - The Gore mugore reInstrastructure 2019- Gumiguru 24, 2019 - Bentley Systems, Inopindirwa, mupi wepasi rose wesoftware yakazara uye gore masevhisi ema digital mapatya, akaunza nyowani gore masevhisi einjiniya enjiniya mapatya. Dhijitari mapatya anomiririrwa nedhijitari epfuma yezvinhu uye ruzivo rweinjiniya, izvo zvinobvumidza vashandisi kuti vanzwisise uye vateedzere mashandiro avo munyika chaiye muhupenyu hwavo hwese. Chokwadi, iyo "evergreen" yedhijitari mapatya anowedzera BIM neGIS kuburikidza ne4D.
Keith Bentley, muvambi nemukuru we tekinoroji, akati: "Nhasi" zera remapatya edhijitari "riri kuenderera, uye kumhanya kwazvo kuri kuita mazuva ese. Vashandisi vekutanga vatakashanda navo vatogara munzvimbo dzehutungamiriri mune idzva remapepa edhijitari, kune zvinangwa zvitsva mumabhizinesi avo uye mumabhizinesi avo emhando. Izvo zvakanakira zvinowanikwa nekutsiva makumi emakore zvekare uye zvakasarudzika workflows yakagadzirwa papepa, ine yakavhurika, mhenyu, yakavimbika uye isingagumi emapatya edhijitari makuru. Kujoinha iyo neyekuvandudza ecosystem kuburikidza yakavhurika sosi mapuratifomu kunogadzira simba risingazungunuke rekuchinja kwesakhiwo. "Handirangariri imwe nguva inonakidza yekuita zveumapurofesa kana yePort Systems."
New masevhisi muDhijitari Twins gore
Masevhisi e-ITwin anotendera makambani einjiniya kugadzira, kuona uye kuongorora mapatya edhijitari emapurojekiti ezvivakwa uye zvinhu. iTwin Services inosangana neiyo digital engineering yezvinyorwa zveBIM maturusi ezvigadzirwa uye yakawanda dhata sosi, ichizadzisa iyo "4D visualization" yemapatya edhijitari, uye kurekodha shanduko yeinjiniya muchirongwa chose / chinhu chemusika, kupa rekodhi ine chekuita neakachinja chii uye rini. Zvikwata zveinjiniya zviri kushandisa iTwin Services kuita ongororo uye kusimbiswa kwedata rekugadzira uye kugadzira ruzivo / dhizaini mazano. Vashandisi veMashini ekugadzira maitiro vanogona kuisa iyo iTwin Design Ongorora sevhisi ye ad hoc dhizaini yekuongorora, uye mapurojekiti timu vachishandisa ProjectWise vanokwanisa kuwedzera iyo iTwin Design Ongorora sevhisi kune yavo yekuita dijitoli kuti vafambise iwo mapatya edhijitari e chirongwa muuzhinji.
PlantSight chipo chinobatanidzwa pamwe chete chakagadzirwa neBentley Systems uye Siemens, iyo inopa varidzi-vanoshanda uye mainjiniya avo kugona kugadzira mhenyu, anogara ari egirini mapatya emaitiro ekushanda. PlantSight inotsigira mashandiro, kugadzirisa, uye mainjiniya kuti uwane yakavimbika uye yakajeka dhijitari data mapatya nenzira yekunyudza, kusanganisira P&ID, 3D mamodheru, uye data reIoT.
Iyo inopa yakasarudzika chiratidzo cheicho chaicho mune yakasimbiswa ruzivo rwemhando, inofambisa mamiriro ehungwaru, mutsara wekuona uye mamiriro ezvinhu kuziva. PlantSight yakagadziridzwa yakabatana neNokia uye Nokia ichishandisa iTwin Services uye inowanika kutengeserana kubva kune chero emakambani.
iTwin Immersive Asset Service inobvumira varidzi-vashandisi vanoshandisa AssetWise kuenderana neasset performance data uye kuongorora kwebasa mune mamiriro emapatya avo edhijitari, vachiita kuti ruzivo rweinjiniya ruwanikwe kune vateereri vakawandisa vevashandisi kuburikidza nezviitiko zvevashandisi. inonyudza uye intuitive mushandisi. iTwin Immersive Asset Service inoratidza "zvakakosha pfungwa" dzebasa uye shanduko mumamiriro ezvinhu epfuma pamusoro penguva, izvo zvinotungamira kukurumidza uye zvirinani kuita sarudzo yekuita sarudzo iyo pakupedzisira inobatsira kuvandudza mashandiro e pfuma uye netiweki.
Mapatya emaDhijitari anopinda muchiitiko chikuru
Iko kungogara kuchiratidzika kwechokwadi kweiyo impahla yakamboshanda kwave kwakaoma kubata digitally uye kuramba yakagadziridzwa. Uye zvakare, iyo inoenderana yeinjiniya ruzivo, mune ayo akasiyana emhando faira mafomu uye shanduko inogara ichichinja, kazhinji yakave iri "dema dhata", haisipo kana isingawanzo. Iine mapatya edhijitari emafu, Bentley inobatsira vashandisi kugadzira uye kusarudza mapatya edhijitari kuti avandudze mashandiro uye kuchengetedza kwezvinhu zvepanyama, masisitimu uye maitiro ekuvaka, kuburikidza nekuisa mukati mekuona mu4D uye kuongororwa.
PaGore re2019 rePortugal muMusangano weBazi, Nzvimbo mbiri dzepadigital dzakavezwa mumapurojekiti ekupedzisira emapoka gumi nemashanu, munzvimbo dzakapoteredzwa nenyika gumi nembiri kubva kuchokufambisa, nzvimbo dzemvura uye zvidyarwa zvekurapa, zvidyarwa zvine simba nezvivakwa Pakazere, mazita gumi nemasere mumapoka gumi nemana vakataura mapatya edhijitari sechinangwa chezvinhu zvinoshandiswa muzvirongwa zvavo, kuwedzera kukuru kwemazita makumi matatu neshanu kana achienzaniswa nera 24.
Pfungwa nezveDhijitari Mapatya mukuita
Pahurukuro yekuita tekinoroji, Keith Bentley akabatana nesiteji nevamiriri vanobva kuSweco neHatch, vachiratidza pfungwa dzemapatya edhijitari materu mukuita.
Sweco digitally yakabatanidzwa mapfumbamwe emakiromita magetsi ejanji njanji chirongwa cheguta reBergen kuNorway. Kuwedzeredzwa kweiyo hurongwa hwanga huripo hwakanyatsotungamirwa kuburikidza nemhando dze3D BIM, kubva kune dzimwe ongororo zvidzidzo kuenda kune yakadzama engineering dhizaini. Iko kushandiswa kweSevhisi masevhisi kwakabvumira Sweco kutevedzera shanduko otomatiki uye kuderedza zvikanganiso, ichibvumidza 4D kuona.
Hatch vakapedza pre-kugona, kugona uye hwakadzama enjiniya yekuisa sulfuric acid kuiswa muDemocratic Republic of the Congo. Zvekugadzira chirimwa chePortugal chakatendera timu yeprojekiti kuti igadzire mapepa akakwana uye akangwara edhijitari zvakanyanya, achifambisa maitiro einjiniya kumusoro sechikamu cheiyo 3D modelling yekuenzanisa, zvichienzaniswa nemaitiro Unhu hwakavakirwa pane zvetsika zvirahwe. Hatch yakakwanisa kuderedza kuwedzera kwekugadzira mushure mekutanga kwemwedzi mitanhatu kusvika svondo.
Microsoft Iye arikugadzira prototypes ema digital mapatya pamuzinda wake weAsia muSingapore uye kune yake Redmond kambasi. Boka reMicrosoft Real Estate uye Chengetedzo riri kuita nzira yekuenda kuDhijitari Yekuvaka Upenyu Dhivhiri kuti ikwanise kuita basa rekuvaka, kuita zvakanaka, kugutsikana kwevashandi, kugadzirwa uye kuchengetedzwa. Kuedza kweMicrosoft kugadzira maratidziro emadhijitari epfuma senge zvivakwa zvinovakirwa paMicrosoft Azure Digital Mapatya, basa reIoT rinobatsira masangano kugadzira mhando dzemadhijitari emamiriro ekunze. Azure Dhijitari Twins akasunungurwa kune veruzhinji pa2018 uye ikozvino iri kugamuchirwa nevatengi veMicrosoft uye vanobatirana navo pasirese, kusanganisira Bentley kune yayo iTwin Services. Iwo makambani ari kushanda pamwe chete kuti vagadzire mapatya edhijitari eMicrosoft's new zvivakwa muSingapore.
Digital mapatya ecosystem
Izvo zviviri iTwin Services uye PlantSight yakagadziriswa ine yakavhurwa sosi yeplatform iModel.js yemadhaini emadhijitari, iyo yakatanga kuvhurwa muna Gumiguru ye2018 uye yakasvika shanduro yayo ye1.0 munaJune we2019. Chikonzero chikuru chekuvhura iyo iModel.js kodhi ndeyekukurudzira hunyowani ecosystem yemadhijitari mapatya ekuvandudza software, varidzi, mainjiniya uye evanobatanidza madhijitari.
Imwe yeaya ecosystem software ekuvandudza ndeye vGIS Inc., iyo yaishandisa iModel.js kubatanidza yakasanganiswa yechokwadi (XR) mhinduro mune yedhijitari yezvekutakura zvivakwa zvemapatya. Yayo yakasanganiswa yechokwadi mobile application inoratidzira inosanganisa chirongwa chekugadzira mhando uye chaicho, mumunda, munguva chaiyo. Vashandisi vari mumunda vanogona kuona zvinoshandiswa zveunyoro, zvakaita sepombi uye tambo, dzakabatanidzwa mune yavo chaiyo-yepasi kutenderera. Vashandisi vanongonongedzera zvinhu nefoni yavo kuti vaone zvigadziriso zveProjekita mune ino mamiriro.
Alec Pestov, muvambi uye CEO weVGIS, akati: "Iyo iModel.js chikuva chinhu chakakosha kuvaka nekubatanidza maturusi akawedzerwa kukosha uye masevhisi, akadai seyakagadzirirwa yakawedzerwa chokwadi uye musanganiswa chaiwo mhinduro unopihwa neVGIS. Tinoda kudyidzana kwakakwana neIyese masevhisi uye nzira yekusimudzira-yakasununguka nzira yekusvikira iyo kubatana kwakakwana, uye isu tinovimba kuwedzera mukana wekubatana kwedu, kuburikidza neTwin services «.
Tsanangudzo yeDhijitari Mapatya
Mapatya emaDhijitari anomiririra madhijitari ezvinhu uye masisitimu epanyama mumamiriro ezvinhu akapoteredzwa, uko ruzivo rweinjiniya rwavo runoyerera, kunzwisisa uye kutevedzera mashandiro avo. Kunge zvinhu chaizvo-zvepasi zvavanomiririra, mapatya edhijitari anogara achichinja. Ivo vanogara vachiwedzeredzwa kubva kune akawanda masosi, kusanganisira ma sensors uye drones, kuti amiririre nyika panguva chaiyo kana mamiriro ekushanda echokwadi-epasi yepasi pezvivakwa zvinhu. Chokwadi, mapatya edhijitari, - kana achibatanidza dijitari mamiriro and the zvikamu zvemadhijitari with the digital chronology, BIM uye GIS kufambira mberi kuburikidza 4D.
Kubatsira kweDhijitari Mapatya
Mapatya emaDhijitari anotendera vashandisi kuti vatarise zvinhu zvese, muwebhu browser, piritsi kana neine yakasanganiswa chaiyo misoro; kukwanisa kuona mamiriro, kuongorora nekugadzira ruzivo rwekufungidzira uye nekukwiridzira kushanda kwechigadzirwa. Vashandisi vanogona kuvaka digitally vasati vavakwa mumuviri kuvaka, kuronga uye kubvisa mabasa ekugadzirisa vasati vaita ivo mukati mechokwadi nyika. Zvino ivo vane software yavainayo yekuona nemazana emamiriro ezvinhu, tora mukana wekudzidzira kwemuchina kuenzanisa zvigadziriso zvekugadzira kana nzira dzekugadzirisa nekukwiridzira mumamirimita akawanda. Kuona uye kugadzirisa mamiriro einjiniya yedata kunoita kuti sarudzo dzive negwara uye vatambi kutora mukana mukutenderera kwehupenyu hwezvinhu.
Nezve Bentley iTwin Services
Masevhisi e-ITwin anotendera zvikwata zveprojekiti uye vanoshandira vanogadzira kuti vagadzire, vone mu4D uye vaongorore mapatya edhijitari epfuma yezvivakwa. ITwin masevhisi inobvumira madhairekitori eruzivo kudhizaina kuti aise enjiniya yedhizaina inogadzirwa neakasiyana matanho ekugadzira muhupenyu hwedhijitari mapatya uye nekuvayananisa neyechokwadi modelling uye imwe data yakabatana, pasina kukanganisa zvishandiso zvavo zvazvazvino kana matanho. Vashandisi vanogona kutarisa nekutsvaga enjiniya shanduko panguva yeprojekti yepurojekiti, vachipa rekodhi ine mutoro wekuti ndiani akachinja chii uye rini. ITwin masevhisi anopa ruzivo runogoneka kune avo vanobatanidzwa mukuita sarudzo mumasangano ese uye nehupenyu kutenderera kwezvinhu. Vashandisi vanoita zvisarudzo zvine ruzivo, kutarisira uye kudzivirira matambudziko vasati vasimuka, uye vanokurumidza kuita chivimbo chakazara, icho chinoshandura mukuchengetedza mari, kuvandudza kuwanikwa kwebasa, kushomeka kwezvemamiriro ekunze uye kuchengetedzwa kwakachengeteka.
Bentley Systems ndiyo inotungamira pasi rese yekupa software mhinduro kune mainjiniya, vavaki, geospatialhunyanzvi, vavaki uye vanoita basa rekugadzira, kugadzira uye mabasa ezvigadzirwa, zvinosanganisira mabasa eruzhinji, mabasa everuzhinji, zvidyarwa nemaindasitiri uye digital maguta. Vhura modelling manyorerwo zvichibva paWindows MicroStation uye yakavhurika simulation application inomhanyisa iyo dhizaini yekubatanidza; Yako ProjectWise uye SYNCHRO inopa kukurudzira iyo kutumira chirongwa; uye yayo AssetWise inopa inosimudzira iyo asset uye network kuita. Kuvhara zvivakwa engineering, Bentley's iTwin services iri kufambira mberi chaiko BIM uye GIS kuburikidza 4D digit mapatya.
Bentley Systems inoshandisa anopfuura 3.500 shamwari, inogadzira mari gore rimwe nerimwe remadhora 700 mamirioni munyika dze170 uye yakaisa mari inodarika $ 1 bhiriyoni mukutsvaga, kusimudzira uye kutenga kubva ku2014. Kubva payakavambwa mu1984, kambani yanga iri yehuwandu hwepfuma yevakawanikwa vashanu, iyo hama dzekwaPortugal. www.bentley.com
Previous Post«Previous «EthicalGEO» - kudiwa kwekudzokorora njodzi dze geospatial maitiro
Next Post Rimwe gore, chimwe chiitiko, chimwe chiitiko chinoshamisa… Iyo yaive YII2019 kwandiri!Next »
Inoshanda dhizaini dhizaini neKuvaka Ruzivo Model yakanangana nekuumbwa kwemagadziriso. Dhirowa, gadzira uye nyora yako ...